Fananganana / fitrandrahana - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Construction / fitrandrahana
Construction / Mining>
Fizahan-tany / Fiarovana ny tranobe taloha>
Miaramila / Polisy>
Inona no atao hoe Smart City
Ny tena fampiharana ny Smart City
Ny fakantsary mihetsika Rainpoo dia manampy amin'ny tetikasan'ny Smart City
Inona no ampiasaina amin'ny fakantsary / fitrandrahana fakan-tsary mihetsika
Miaraka amin'ny rindrambaiko 3D an-tsarintany, afaka mandrefy mivantana ny halavirana, ny halavany, ny faritra, ny habetsahany ary ny angona hafa ao amin'ny maodely 3D .. Ity fomba fandrefesana haingam-pandeha sy tsy lafo ity dia mahasoa indrindra amin'ny fikajiana ny tahiry amin'ny toeram-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy ny toeram-pitrandrahana ho an'ny tanjona fitadiavana na fanaraha-maso.
Fanaraha-maso sy fandrindrana ny asa
Miaraka amin'ny maodely 3D marina novokarina avy tamina fakantsary madiodio, ny mpitantana ny fanamboaran-trano / toeram-pitrandrahana izao dia afaka mamolavola sy mitantana tsara kokoa ny asan'ny tranokala rehefa miara-miasa amin'ireo ekipa izy ireo. Izany dia satria azon'izy ireo atao ny manombana bebe kokoa ny habetsaky ny fitaovana tsy maintsy alaina na hafindra mifanaraka amin'ny drafitra na fenitra ara-dalàna.
Fanombanana mialoha sy aorian'ny fandavahana na fanapoahana
Amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary manjary mitrandraka amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany dia mamokatra fanamboarana 3D maodely lafo vidy sy mora azo ianao ary maodely ambonimbony kokoa ho an'ireo faritra hasiana fofona na fandavahana. Ireo maodely ireo dia manampy amin'ny famakafakana marina ny faritra hajaka sy ny fikajiana ny habetsaky ny fitrandrahana taorian'ny fipoahana. Ity data ity dia ahafahanao mitantana loharanom-pahalalana tsara kokoa toy ny isan'ny kamio ilaina. Ny fampitahana amin'ny fanadihadiana natao taloha sy taorian'ny fipoahana dia hamela ny fanaovana kajy marimarina kokoa. Manatsara ny drafitra ho an'ny fipoahana amin'ny ho avy io, mampihena ny vidin'ny zavatra poapoaka, ny fotoana eny an-toerana ary ny fandavahana.
Maninona no mampiasa drôna sy fakan-tsary mihetsika amin'ny fananganana / fitrandrahana
Azo antoka ho an'ny mpiasa
Noho ny fahasarotan'ny toetran'ny asa fanamboarana sy ny fitrandrahana dia laharam-pahamehana ny fiarovana ny mpiasa. Miaraka amin'ireo maodely voavolavola avo lenta avy amin'ny fakan-tsary madiodio, azonao atao ny manara-maso ireo faritra sarotra idirana na fivezivezena be ao amin'ilay tranokala, nefa tsy hampidi-doza anao mpiasa any aminay.
Ny maodely 3D namboarina tamina fakan-tsary miavaka dia mahatratra ny marim-pototra amin'ny fanadihadiana miaraka amin'ny fotoana kely kokoa, vitsy ny olona, ​​ary kely ny fitaovana.
Vidiny kely kokoa
Ny fitantanana sy ny fametrahana ny tetikasa dia azo tanterahina amin'ny maodely 3D raha tsy misy ny asa mankany amin'ny tranokala hampihatra ireo asa ireo, izay hampihena be ny vidiny.
Asa be dia be no nafindra tao amin'ny solosaina, izay nitahiry be ny ora ankapobeny amin'ny tetikasa iray manontolo